ecobee 7.17.0.50915 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.17.0.50915 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ ecobee
ecobee ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ecobee လွယ်ကူသင်သည်သင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့မထိခိုက်စေဘဲနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ငွေစုတိုးမြှင့်ဖို့စေသည်။ အဆိုပါ ecobee app ကိုနှင့်အတူသငျသညျအချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသင့်ရဲ့အလင်းအိမ်နှင့်အပူချိန် setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်တပြင်လုံးကိုအိမ်မှာနှစ်သိမ့်မွေ့လျော်နိုင်ဘူး။ အိမ်ကနေ? ကရေတွက်တဲ့အခါသင်စွမ်းအင်ချွေတာနေသေချာပါစေနှင့်အရှိဆုံးအရေးပါသောအခန်းများအပေါ် tabs များစောင့်ရှောက်လော့။
သငျသညျမှနျ ecobee app ကိုသုံးနိုင်သည်
- installation ကိုမှတဆင့်လေပြေလေညင်း။ ဗီဒီယိုများနှင့်ကားချပ်တစ်ခုစီကိုခြေလှမ်းကတဆင့်သင်ကသွားလာရကြ၏။
- အဆင်ပြေနေပါ။ သင့်ရဲ့အကြိုက်မှသင်တို့၏သက်သာအချိန်ဇယားနဲ့ဦးစားပေးတက်သတ်မှတ်မည်။
- စိတ်ငြိမ်သက်ရယူပါ။ , ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးသင့်ရဲ့အပူချိန်, အလင်းရောင်နှင့်ဦးစားပေး Adjust ။ ထငျရာစိုငျးလငျးကို Turn
- စွမ်းအင် Save ။ mode ကိုအဝေးမှမူလစာမျက်နှာမှသင်၏ ecobee အပူထိန်းကိရိယာ Switch များနှင့်နေဖြင့်မည်သည့်ထငျရာစိုငျးလငျးအိမျကို turn off ။
- သင်ပယ်ရှင်းနေလျှင်ပင်အခြားလူတိုင်းပျော်ရွှင်အောင်ထားပါ။ အိမ်တအိမ်-စောင့်များအတွက် setting များကို Adjust, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးနှောက်အာရုံကြော pup စိတ်ချဖို့အလင်းအိမ်အပေါ်လှည့်။
ကျနော်တို့ခွင့်ပြုဘို့ငါတို့အသုံးပြုသူများသည် '' တုံ့ပြန်ချက် (နှင့်မီးဖြတ်ထိုးဉာဏ်) ယူဘယ်တော့မှသောကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အတှေးအပိုအလိုရှိ၏။ ios@ecobee.com / android@ecobee.com
ecobee အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ecobee အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ecobee အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ecobee အား အခ်က္ျပပါ
raypino စတိုး 19.41k 3.61M
ecobee ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ecobee အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.17.0.50915
ထုတ်လုပ်သူ ecobee inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.ecobee.com/legal/use/
Release date: 2019-09-06 20:25:00
လက်မှတ် SHA1: 53:38:C5:CC:41:E4:0D:78:BD:D1:3F:11:AD:04:9D:CC:28:C9:67:1E
အဖွဲ့အစည်း (O): ecobee
ecobee APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ